फेसबुकको गोपनियता नीति अपडेट, के छ नयाँ नीतिमा ? – Annapurna Post News
May 27, 2022 sujaLeaveaComment on फेसबुकको गोपनियता नीति अपडेट, के छ नयाँ नीतिमा ?
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाल फुसबुक मेटाले आफ्नो गोपनीयता नीति अपडेट गरेको छ। बिहीबार मेटाले फेसबुक, मेसेन्जर र इन्स्टाग्रामका लागि आफ्नो डाटा नीतिहरू अद्यावधिक गरिरहेको बताएको छ। यो अपडेट पछि प्रयोगकर्ताहरूले आफ्नो व्यक्तिगत डाटा कहिले, कसरी र कुन कारणले प्रयोग गरेको छ भन्ने थाहा पाउन सकिन्छ ।
यो नयाँ नीतिको नाम प्राइभेसी पोलिसी रहेको कम्पनीले साउन २६ गतेदेखि लागू हुने जनाएको छ । त्यसोभए मेटाको यो गोपनीयता नीतिको बारेमा जानौं। यस अपडेट नीतिमा, मेटाले अब आफ्ना प्रयोगकर्ताहरूलाई कम्पनीले प्रयोगकर्ताहरूको व्यक्तिगत डेटा कसरी प्रयोग गर्छ भनेर अझ स्पष्ट र स्पष्ट रूपमा व्याख्या गर्न सक्षम हुनेछ। प्रयोगकर्ताहरूले आन्तरिक प्रोटोकल ठेगानाको विवरण र स्थान सम्बन्धित विवरणहरू पनि प्राप्त गर्नेछन्।
गोपनियता नीति बाहेक फेसबुक, मेसेन्जर र इन्स्टाग्रामको सेवा अवधि पनि प्रयोगकर्ताको आवश्यकता अनुसार अपडेट गरिएको मेटाले जनाएको छ । हालै अमेरिका, अष्ट्रेलिया र भारतलगायत धेरै युरोपेली देशका सरकारले मेटाको गोपनीयता नीतिको विरोध गर्दै कडा निर्देशन पनि दिएका थिए ।
भारत सरकारले पनि मेटालाई कडा निर्देशन दिएको थियो र नागरिकको गोपनीयतामा कुनै असर पर्ने खालको गोपनीयता नीति बनाउनु हुँदैन भन्यो। यस कारणले गर्दा, बिहीबार, मेटाले आफ्नो नयाँ गोपनीयता नीति लागू गर्ने घोषणा गर्‍यो, र भन्यो कि भारतीय प्रयोगकर्ताहरूले मेटाको नयाँ गोपनीयता नीति स्वीकार गर्न अनिवार्य हुनेछैन।
बालेनको हिसाबले खायो फेल !
जहाज दुर्घटनामा ज्यान गुमाएकाको शव आज परिवारलाई जिम्मा लगाइने
अपडेट काठमाडौंः बालेनले कटाए ४४ हजार मत
May 23, 2022 May 23, 2022 suja
भरतपुरमा रेनु ११ हजार नजिक पुगिन्, विजयको कति ?